Vaovao - Inona no entana be mpitia indrindra amin'ity haingon-trano Krismasy haingo anaty trano ity
Inona no entana malaza indrindra amin'ity vanim-potoana Noely ity?
Isaky ny vanim-potoana Noely dia azonao atao ny manontany hoe inona avy ireo entana fironana amin'ny haingon-trano? Ilay anwser angamba hazo krismasy, hazavana tadin'ny Noely, Santa Sack, karatra krismasy na zavatra hafa.
Fa ho an'ity vanim-potoana ity, ny zavatra be mpitia indrindra dia tiako ny milaza ny hanger vy ho fehiloha Krismasy, hazo ary stockings (ny «hanger stocking»).
Aza adino, nandritra ny vanim-potoana Krismasy lasa teo dia hanangana hazo Krismasy ianao ary hitafy fehiloha Krismasy, ary ny tena zava-dehibe dia ahantonanao eo amin'ny rindrina na eo am-patana ho an'ny ankizy ny stockings, raha toa ka noforonina tsara momba izany ny tranonao toerana, avy eo dia mety handalo ny manaraka ianao;
Raha tsy natao hanana toerana hanantonana ny fehiloha, stockings ny tranonao, dia hanampy anao hamaha milamina ity olana ity ny hanger vy.
Ny hooker Metal misy desigh manokana dia hanampy anao hanana toerana hanantonana ny fehiloha, firavaka hazo, stockings Krismasy tena tsara; ary amin'ny teboka tena ilaina dia tsy handratra ny fanaka ao amin'ny efitranonao izy io, ary azonao afindra amin'ny toerana rehetra ao amin'ny efitranonao, fa tsy amin'ny toerana iray voafaritra ihany, fivoriambe ho an'ny haingon-trano.
Ka ny tena teboka amin'ity vanim-potoanan'ny Krismasy ity dia ny fananana hanger vy amin'ny fehiloha Noely sy ny stockings anao.